▷ प्रतियोगिता - HOTH BRICKS ▷ प्रतियोगिता - HOTH BRICKS
प्रतियोगिता: लेगो स्टार वार्स 75309 रिपब्लिक गनशिप सेटको प्रतिलिपि जित्नुहोस्!
25/11/2021 - 18:22 काला शुक्रवार 2021 प्रतियोगिता लेगो स्टार वार्स नयाँ LEGO 2021
प्रतिज्ञा गरे अनुसार, म तपाईंलाई यस सप्ताहन्तको लागि LEGO Star Wars सेटको प्रतिलिपिको साथ LEGO मा ब्ल्याक फ्राइडे सुरु हुनु केही घण्टा अघि नयाँ प्रतियोगिता प्रस्ताव गर्दैछु। 75309१XNUMX रिपब्लिक गनशिप (सार्वजनिक मूल्य: 349.99 €) जित्न। मैले केहि दिन अघि प्राप्त गरेको प्रतिलिपि र यहाँ संलग्न रहेको बक्समा गलत लोगोले सजाइएको छ भन्ने कुरा सबैभन्दा पर्यवेक्षकले याद गर्नेछन्।
यस नयाँ प्रतियोगितामा तपाईंको सहभागिता प्रमाणित गर्न र कम लागतमा तपाईंको सेल्फमा हेलिकप्टर थप्ने प्रयास गर्नुहोस्, तपाईंले तलको इन्टरफेस मार्फत आफूलाई पहिचान गर्न र प्रदान गरिएका निर्देशनहरू पालना गर्नु पर्छ। सामान्य रूपमा, यो आधिकारिक अनलाइन स्टोरमा जानकारी खोज्ने र त्यसपछि सोधिएको प्रश्नको सही जवाफ दिने प्रश्न हो। सहभागिता चरणको अन्त्यमा, सही उत्तरहरू मध्येबाट चिट्ठा निकालेर विजेता छनोट गरिनेछ।
प्रतियोगिता: LEGO Harry Potter 76391 Hogwarts Icons कलेक्टरको संस्करण सेटको प्रतिलिपि जित्नुहोस्!
19/11/2021 - 18:05 प्रतियोगिता लेगो ह्यारी कुम्हार नयाँ LEGO 2021
भाग्यशाली विजेतालाई धेरै सफल LEGO ह्यारी पोटर सेटको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न अनुमति दिने प्रतियोगिताको लागि अगाडि बढ्नुहोस्। 76391 Hogwarts प्रतीक कलेक्टर को संस्करण र यस प्रक्रियामा 249.99 € को मामूली रकम बचत गर्नुहोस्, यो VIP / ब्ल्याक फ्राइडे सप्ताहन्त अवधिमा अन्यत्र त्यस्तो रकम खर्च गर्ने पर्याप्त अवसरहरू हुनेछन्। कृपया ध्यान दिनुहोस्, यो VIP प्रि-सप्ताहन्त प्रतियोगिताको अवधि सामान्य भन्दा असाधारण रूपमा छोटो छ। ब्ल्याक फ्राइडे २०२१ को लागि तपाईंलाई प्रस्ताव गर्नको लागि मसँग कम्तिमा पनि राम्रो चीज हुनेछ ...
यस नयाँ प्रतियोगितामा तपाईंको सहभागिता प्रमाणित गर्न र कम लागतमा तपाईंको सेल्फमा सेतो उल्लू थप्ने प्रयास गर्नुहोस्, तपाईंले तलको इन्टरफेस मार्फत आफूलाई पहिचान गर्न र प्रदान गरिएका निर्देशनहरू पालना गर्नु पर्छ। सामान्य रूपमा, यो आधिकारिक अनलाइन स्टोरमा जानकारी खोज्ने र त्यसपछि सोधिएको प्रश्नको सही जवाफ दिने प्रश्न हो। सहभागिता चरणको अन्त्यमा, सही उत्तरहरू मध्येबाट चिट्ठा निकालेर विजेता छनोट गरिनेछ।
अशिक्षित प्रतिस्पर्धीहरूको लागि सानो स्पष्टीकरण: टिप्पणी मार्फत कुनै सहभागिता छैन।
LEGO शपमा: २१३३० होम अलोन हाउस सेट र $ १००० जित्ने मौकाको लागि केभिन म्याकलिस्टर खोज्नुहोस्।
02/11/2021 - 00:55 प्रतियोगिता लेगो विचारहरू समाचार लेगो LEGO VIP कार्यक्रम
याद गर्नुहोस्, जब LEGO विचार सेट आधिकारिक रूपमा घोषणा गरिएको थियो 21330 घर एक्लो घर, LEGO ले एउटा प्रतियोगिताको अस्तित्वलाई उल्लेख गरेको छ जसले सिद्धान्तमा भाग्यशाली विजेतालाई प्रश्नमा रहेको सेटको प्रतिलिपि र $ 1000 को भाउचर आधिकारिक अनलाइन स्टोरमा खर्च गर्न अनुमति दिनुपर्छ।
सिद्धान्तमा, प्रस्ताव आकर्षक छ। वास्तवमा, यस प्रतियोगिताको मेकानिक्स कुनै पनि अवसर वा कुनै अनियमित ड्रमा आधारित छैन, यो जित्ने आशा गर्न रचनात्मक हुन आवश्यक हुनेछ।
पहिले, तपाईंले केभिन म्याकलिस्टरको मिनिफिगर, लेगो पसलमा कतै "लुकेको" पत्ता लगाउनु पर्छ। म तपाईंको लागि कार्य सरल बनाउनेछु, यो "लुकेको" मा छ "वयस्क स्वागत" पृष्ठ du शप मनोरञ्जन खण्डमा। केवल पृष्ठ स्क्रोल गर्नुहोस्, मिनिफिग सेटको बीचमा छ २१21324२ 123 १२XNUMX तिल स्ट्रिट र सेट २१21328 Seinfeld.
त्यहाँबाट, तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईंले प्रविष्टि फारम पूरा गर्न कोड KEVIN प्रयोग गर्नुपर्नेछ जुन "तपाईंको अंक बढाउनुहोस्" खण्डमा फेला पार्न सकिन्छ। VIP कार्यक्रमको लागि समर्पित ठाउँ.
तपाईले गर्नु पर्ने कुरा भनेको प्रदान गरिएको क्षेत्रमा कोड प्रविष्ट गर्नुहोस् र बाँकी फारम पूरा गर्नुहोस्, सकेसम्म मौलिक हुन प्रयास गर्नुहोस्। विचार भनेको वर्षको अन्त्यको उत्सवको लागि कसलाई र किन निम्तो दिन चाहनुहुन्छ भनेर संकेत गर्नु हो। LEGO र Disney समूहका कर्मचारीहरू मिलेर बनेको जूरीले विजेता छनौट गर्नेछ।
प्रतिज्ञा गरिएको एन्डोमेन्टले फारम भर्नका लागि केही मिनेट खर्च गर्ने औचित्य छ कि छैन भनेर हेर्ने कुरा तपाईंमा निर्भर छ, तपाईंसँग आफ्नो मन बनाउन नोभेम्बर 30 सम्म छ।
प्रतियोगिता: LEGO The Hobbit 79018 The Lonely Mountain को एक प्रतिलिपि जित्न लागिएको छ!
29/10/2021 - 19:16 प्रतियोगिता LEGO LOTR र होबिट
यदि तपाईलाई थाहा छैन भने ब्रिकेफन शो को 17 औं एपिसोड हो Youtube मा उपलब्ध छ, यो प्रतियोगिता सायद तपाईंलाई यसमा चासो दिने अवसर हुनेछ। र यस पछिल्लो एपिसोडले LEGO The Hobbit दायरासँग सम्झौता गरेको हुनाले, कार्यक्रमसँग मेल खानको लागि एन्डोमेन्ट आवश्यक थियो: त्यसैले म सेटको नयाँ र छापिएको प्रतिलिपि खेलमा राख्दैछु। 79018 ००१XNUMX एक्लो पर्वत अक्टोबर 2014 र जुलाई 2015 बीच € 129.99 को सार्वजनिक मूल्यमा मार्केट गरिएको। तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, यस बाकसको मूल्य दोस्रो बजारमा गगनचुम्बी छ।
यस नयाँ प्रतियोगितामा आफ्नो सहभागिता प्रमाणित गर्न र धेरै वर्षदेखि मार्केटिङ नगरिएको यो राम्रो सेट जित्ने प्रयास गर्नुहोस्, तपाईंले तलको इन्टरफेस मार्फत आफूलाई पहिचान गर्न र प्रदान गरिएका निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्छ। तपाईंले योडाको मिनिफिगर पत्ता लगाउन आवश्यक छ, माथिको फोटोमा देखिने, जुन भिडियोको दृश्यहरू मध्ये एकमा लुकेको छ। तपाईंले मूर्ति देख्नुभएपछि, तपाईंले तलको इन्टरफेसमा सोधिएको प्रश्नको सही जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। सहभागिता चरणको अन्त्यमा, सही उत्तरहरू मध्येबाट चिट्ठा निकालेर विजेता छनोट गरिनेछ। योडाको मिनिफिगर एन्डोमेन्टमा समावेश गरिएको छैन, मेरो दयाको दुरुपयोग नगर्नुहोस्।
पुरस्कार म द्वारा उपलब्ध गराईएको छ, यो म द्वारा विजेतालाई पठाइनेछ र कोलिसिमो द्वारा त्यसपछि बीमा र हस्ताक्षरमा हस्ताक्षर (र उपयुक्त प्याकेजि)) को लागी उनीहरूको सम्पर्क विवरणहरू फिर्ता ईमेल द्वारा पुष्टि भएसम्म।
सधैं झैँ, मसँग कुनै पनि सहभागीलाई अयोग्य ठहराउने अधिकार सुरक्षित छ जसले ठगी गर्ने वा प्रवेश प्रणाली अपहरण गर्ने प्रयास गरेको छ ताकि तिनीहरूको जित्ने सम्भावना बढाउन। घृणित र नराम्रो हार्नेहरू टाढै रहन्छन्, अरूले जित्ने अधिक मौका पाउनेछन्। टिप्पणी मार्फत कुनै सहभागिता छैन।
अद्यावधिक गर्नुहोस्: पुरस्कार ड्रा भयो। विजेताको नाम माथिको इन्टरफेसमा प्रदर्शित हुन्छ।
FYI, प्रश्नको सही उत्तर Lacville थियो:
पृष्ठ १ 1 50। को1234अर्को पृष्ठ>अन्तिम पाना "